mairie-antananarivo – Fitsidihana ireo traboina tany amin’ny boriborintany faha enina
Fitsidihana ireo traboina tany amin’ny boriborintany faha enina
auteur 13 martsa 2017 Commentaires fermés
Tsy namelan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra raha tsy voatsidika daholo ny traboina eran’ny Boriboritany enina satria tsy mandry ny fo sy ny saina amin’ireo tranga mahazo ny vahoaka. Ka androany Sabotsy 11 martsa 2017 dia nitsidika ireo traboina tetsy amin’ny Epp Anosivavaka ny solon-tenany, notarihan’ny Lefitra voalohan’ny Ben’ny Tanàna, ny Col Ramboasalama Emilien.
Anjaran’ny boriborintany faha- 6 ny voalohany, izay nahitana tra-boina miisa 175 teo amin’ny Fokontany Anosivavaka Ambohimanarina. Nanarakaka avy eo ny Fokontany Ambaravarankazo misy Traboina 74 avy amin’ny fianankaviana 19 ; Betsaka tamin’ireo ny rava trano ary manjaka ny aretin-kibo sy ny fahasemporana. Efa nandray andraikitra amin’izany koa ny teo an’ivon’ny Kaominina.
Tetsy amin’ny Boriborintany faha efatra Anosipatrana no namaranana ny fitsidihana narahana fanampiana izay nisy tra-boina miisa 230. 199 ireo tra-boina tao amin’ny EPP Anosipatrana Atsinanana ary 157 ny tao amin’ny EPP Ilanivato. Nisy ihany koa moa ny Reny tera-bao tao amin’ny EPP Anosipatrana nandritra ny nivanianany tao.
Ireo rehetra ireo dia samy notolorana vary, menaka, bodofotsy, mofo, Sur Eau hanadiovana ny rano fisotro, teo ihany koa ny savony, ny tsihy sy ny Ballatum hilafiana, ary ny rano Olympiko hosotroina.
Efa misy koa ireo dokotera izay mijery maimaim-poana isaky ny toby misy azy ireo. Marihana fa niara-nifanome tanana tamin’ny fitsidihan’ny Kaominina Antananarivo Renivohohitra ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny nahitana ny Delegen’ny boriborintany sy ny solombavambahoaka.